Hey’adda Nabadsugida qaranka oo faah faahin ka bixisay howlgalo boqolaal ruux lagu soo qabtay – idalenews.com
Hey’adda Nabadsugida qaranka oo faah faahin ka bixisay howlgalo boqolaal ruux lagu soo qabtay
Hey’adda nabadsugida qaranka ayaa faah faahin ka bixisay howl galo boqolaal ruux lagu soo qab qabtay, kaasoo xalay Ciidamada amaanka dowladda ay ka sameeyeen degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir.
Taliyaha Ciidamada nabadsugida gobolka Banaadir ayaa sheegay in howl galkan uu ahaa mid ay ka wada qeyb qaateen Ciidamada kala duwan ee amniga, kaasoo xalay saqdii dhexe lagu qaaday degmooyinka Yaaqshiid iyo Huriwaa.
“Howl galkan ay ka qeyb qaateen dhamaan ciidamada Amniga, sida Nabadsugida, Milateriga iyo Booliska waxaa xalay laga sameeyay afartii habeenimo degmooyinka Yaaqshiid iyo Huriwaa, halkaas oo naloogu sheegay xog ku saabsan in kooxaha nabad diidka ay ku dhuumaaleysanayaan”ayuu yiri Khaliif Ereg
Khaliif Ereg ayaa sidoo kale sheegay in howlgalkan uu soconayo muddo dheer, isla markaana qorshuhu yahay inta laga xasilinayo caasimada, isagoo xusay inuu ahaa howl gal mira dhalay.
“Waxaa ku soo qabanay 477-ruux, 137-ruux ayaa hada la hubaa, kuwa aan dambiga laheyn waa sii deynay, kuwa dambiga lahaa maxkamad ayaa la soo taagayaa, waa howl gal mira dhalay oo dad la hubo lagu soo qabtay”ayuu yiri Khaliif Axmed Ereg.
Hey’adda Nabadsugida qaranka ayaa dhowr jeer hore howl galo ay ka sameysay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, iyagoo dad badan oo lagu soo qabtay lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho.
Mareykanka oo sheegay inuu ka qeyb qaatay howl galkii Buulo Mareer